यसरी मनाए हाँस्यकलाकार दमन रुपाखेतीले ४३ औँ जन्मदिन (भडियो) | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
यसरी मनाए हाँस्यकलाकार दमन रुपाखेतीले ४३ औँ जन्मदिन (भडियो)
असार २७, २०७५ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाडौं – हाँस्य कलाकार दमन रुपाखेतीले असार २७ गते ४३ औँ जन्म दिन मनाएका छन् ।
व्रिकम सम्बत २०३२ सालमा तत्कालिन थानकोटको महादेवस्थान गाविस वडा नम्बर ५ मा आजकै दिन जन्मेका रुपाखेतीले रेडियोअडियोमा आफ्नो ४३ औं जन्मदिन मनाएका हुन् । दमनले व्रिकम सम्बत २०४५ सालमा बाल कलाकारको रुपमा कलाकारिताको शुरुवात गरेका हुन् । त्यसपछि उनले विक्रम सम्बत २०४९ सालमा दिनेश डिसीको ‘ट्वाक्क टुक्क’मा काम गर्ने अवसर पाए । ‘ट्वाक्क टुक्क’मा आएपछि उनको भेट भयो कलाकार जितु नेपालसँग ।
‘ट्वाक्क टुक्क’मा काम गर्दा गर्दै उनीहरुले एक पटक दाजु–भाई भन्ने चुट्कीलामा काम गरे । यो चुट्कीलामा काम गरेपछि उनीहरुलाई दर्शकले पनि साच्चिकै दाजु–भाईको रुपमा हेर्न थाले । त्यसपछि उनीहरुले रेडियो नाटक र स्टेजमा एकसाथ काम गर्न थाले । केही वर्ष यो जोडी जम्यो ।
तर पछि केही कारण उनीहरुले आ–आफ्नो तरिकाले काम गर्न थाले । दुई वर्ष अघि मात्रै उनीहरुले स्टेज सेयर गरेका थिए । तर त्यसलाई उनीहरुले निरन्तरता भने दिन सकेनन् । तर उनीहरुको व्यक्तिगत सम्बन्ध भने कायमै छ ।
पछिल्लो समय दमन रुपाखेती सानो पर्दासँगै ठूलो पर्दामा पनि व्यस्त छन् । केही समय अघि मात्रै सिनेमा गोलको छायाकंन सकेर आएका उनी यतिबेला ल्याङल्याङको छायाकंनको तयारीमा जुटेका छन् । उनको निर्देशनमा हुन्छ बहादुर र हाक्काहाक्की प्रसारण भइरहेका छन् ।
म यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छु जुन अरुका लागि सपना बनोस् : नवाजुद्दीन सिद्दीकी
साम्राज्ञी र मयंकको ब्रेकअप !
इंग्ल्याण्डलाई २-१ ले स्तब्ध बनाउँदै क्रोएसिया पहिलो पल्ट विश्वकप...
डा.केसी काठमाडौं नआएसम्म वार्ता टोली नबनाउने सरकारको अडान
विद्युतीय गाडी किन्दा अब सहुलियतमा ऋण पाइने
९० प्रतिशत खानेपानीको मुहान प्रदूषित,
डाक्टर केसीका माग पूरा नभए सडक आन्दोलनमा जाने शिक्षण अस्पतालक...
बिषालु च्याउ खाँदा एकै परिवारका तीनजना बिरामी
बिहीबार दिनभर बालाजु क्षेत्रमा बत्ति नआउने
काठमाडाैं उपत्यकामा दिउँसो टिप्पर चलाउन रोक
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी के र कहाँ होला ? तयारी यस्तो छ
क्यानडामा फेरि चम्किए सन्दीप, लिए ३ विकेट
विश्वकपको सेमिफाइनलका खेल आजदेखि : बेल्जियम र फ्रान्स खेल्ने